Activities in Yangon Archives - Yangon Thu Michelle
Posts Tagged: Activities in Yangon
Indoor Rock Climbing in Yangon
Articles November 19, 2021
လူတိုင်းပျော်မနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်တွေ မွမ်းကြပ်နေတယ်ဟုတ်။ ဒီအချိန်မှာ ပျော်ရတယ်လည်းမဟုတ်၊ စိတ်အပန်းပြေအောင် activity လုပ်ချင်တယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း တူတူစုံရဖို့ဆိုရင် indoor rock climbing ကို စမ်းကြည့်ကြည့်ပါလား….။
An Intro to Myanmar National Library
Places and landmarks, Video December 3, 2018
Dear my beloved friends, today topic is an intro to Myanmar national library.
The experience of learning Kendo in Myanmar
Activities, Video November 2, 2018
Today I’m gonna share about the experience of learning Kendo in Myanmar.
Old glass factory
Places and landmarks, Video October 12, 2018
ဒီတခါ သွားခဲ့တဲ့နေရာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ စက်ရုံဟောင်းကြီး တစ်ခု (Old glass factory) က ၁၅၂၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ ယောဂီကျောင်းလမ်းကနေဝင်လိုက်ရင် သိပ်မသွားရဘူး။ နဂါးဖန်ချက်စက်ရုံ လို့ခေါ်တယ်။
Myanmar Traditional Boxing (Lethwei)
Activities, Video September 21, 2018
အခုခေတ်မှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များလာတာ လက်ဝှေ့ပါ။ ကစ်ဘောက်ဆင်၊ မွေထိုင်း၊ Mixed martial arts (MMA) စသည်ဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲက မြန်မာ့လက်ဝှေ့ (Myanmar Traditional Boxing Lethwei) က မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာအားကစားနည်းပါ။
Gun shooting range in Yangon
Activities, Video August 17, 2018
ဒီတစ်ခါတော့ မြောက်ဒဂုံမှာရှိတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သေနတ်ပစ်ကွင်း (Gun shooting range in Yangon) ကို သွားပြီး သေနတ်အစစ်တွေ ပစ်ခဲ့တယ်။ သေနတ်တွေကို သေချာထိန်းသိမ်းထားပြီး အစစ်နဲ့ပစ်ခွင့်က တခြားဘယ်နေရာမှာမှ မရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ သွားပစ်ခဲ့တယ်။
Fine dining experience in Myanmar
Activities, Video August 10, 2018
ဒီတစ်ခါ ရန်ကုန်သူမီရှဲအရင်က ကြုံခဲ့တဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကို အမှတ်ရလို့ ဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ This video is about fine dining experience in Myanmar.
Bowling in Yangon
Activities, Video July 27, 2018
ရန်ကုန်သူမီရှဲ ဒီတစ်ခါ ဘိုးလင်း (Bowling in Yangon) သွားပစ်ခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပျော်စရာအနေနဲ့ အမေးအဖြေ အစီအစဉ်တစ်ခုလည်း ထည့်ထားပါတယ်။ အဖြေမှန်တဲ့သူတွေထဲကမှ မဲနှိက်ပြီးတော့ Honor7A ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး မဲဖောက်ပေးပါမယ်။
Horse Riding in Yangon
Activities, Video May 18, 2018
ဒီအပတ်တော့ ရန်ကုန်သူမီရှဲတစ်ယောက် ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ တွေးရင်း ရန်ကုန်မှာမြင်းစီးလို့ရတာ (Horse Riding in Yangon) သတိရသွားတယ်။ သူများနိုင်ငံမှာလို မြို့ပြင်ထွက် တောသွားမှ စီးရတာ မဟုတ်ဘဲ မြို့တွင်းမှာတင် စီးလို့ရတယ်။ (သူများနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုရှိလဲ သိတာကျနေတာပဲ)
Activities, Video March 23, 2018
ဒီတစ်ပတ်တော့ လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ rock climbing လေ့ကျင့်ခန်း သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ တချို့ gym တွေမှာလည်း ဒီလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ မီရှဲကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်းမှာရှိတဲ့ ဧဝရက်တောင် တက်ခဲ့တဲ့ ကိုဒိုးလုံးတို့ ဖွင့်ထားတဲ့ Climb O’Clock Training[…]